Somaliland oo ka hor istaagtay Wafdi Puntland in ay galaan Sadex goobod oo Imtixaan ka socday Gobalka Sanaag. – Puntlandtimes
BADHAN(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Badhan ee gobalka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamo katirsan Somaliland oo fara badan lasoo dhigay inta badan deegaanada kala ah Damala-Xagare, Ceelbuh iyo Carmale oo katirsan gobalka Sanaag.
Wasiirka Waxbarashada Puntland oo ay wehliyaan xubno katirsan golaha Wasiiradda ee maamulka ayaa doonayay in ay tagaan deegaanadaas ayna kormeeraan Imtixaanka Shahaadiga ah ee Puntland oo ka socday, balse ay diideen ciidamada Somaliland.
In ka badan 17 baabuurta dagaalka ah oo ay leedahay Somaliland oo xalay ka baxay deegaanka Yubbe ayaa isku fidiyey wadooyinka loo maro magaalooyinkaas, waxayna sheegeen in ay la dagaalamayaan cidii Puntland ka socota ee isku dayda in ay u gudubto deegaanadaas.
Xiisad ka dhalatay is hor istaaga Puntland ayaa ka taagan deegaanadaas, waxaana shalay jiray in wasiirka Waxbarashada iyo xubno la socday ay tageen Jiidaha ay kusugan yihiin ciidamada Puntland ee kulaalaya Yubbe, iyagoo hadalo kala duwan ka jeediyey.
Magaalada Badhan waxaa kusugan wafdi ka socda Somaliland, oo uu hogaaminayo Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta oo ka soo jeeda gobalka Sanaag, isagoo la kulmay qaar kamid ah Isimadda oo ay ka wada hadleen mashaariic horumarineed.